Lix qodob oo ay ku heshiiyeen Dowladda fedaraalka iyo maamul goboleedyada - BBC News Somali
Madaxda waxa uu shirka uga socday madaxtooyada Soomaaliya
Waxaa magaalada Muqdisho maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii Madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uga socday halkaasi.
War murtiyeed laga soo saaray gabagabadii shirka ayaa waxa ay dowladda fedaraalka iyo maamul goboleedyada ku heshiyeen dhowr qodob.
Qodabada lagu heshiisayay waxaa ka mid ah arrimaha siyaasada, Aminiga, doorashada 2020 iyo dib eegista dastuurka iyo qeybsiga mashaariicda horumarinta
Soomaaliya Waxaa ka jiray khilaaf u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka iyo hoggaamiyayaash maamul goboleedyada.
Arrinta siyaasada ayaa waxa dhinacyadan ay ku heshiiiyeen in lagu wada shaqeeyo jawi ku dhisan kalsooni,dulqaad,tanaazul iyo masuuliyad midaysan.
Waxaa sidoo kale qodabada ay ku heshiiyeen dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada ka mid ah in la xoojiyo wadashaqaynta labada dhinax lagana fogaado wax waliba oo keeni kara shaki iyo xasaasiyad siyaasadeed.
Soomaaliya waxaa ka jiro caqabado dhanka amniga ah. todobaadyadii la soo dhaafay waxaa ka dhacay qaraxyo waawayn.
Madaxda dowlada fedaraalka iyo dowlad goboleedyada waxa ay imika sheegeen in ay isku afgarteen in la xoojiyo ammaanka islamarkana hal meel looga soo wadajeedsto dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeeray argagixisada.
"Waa In lala yimaadaa qorsha dhamaystiran oo wadajir ah oo lagula dagaalamayo argagixisada guud ahaan Soomaaliya," ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ay hoggaamiyayaasha soo saareen.
Dhinacyadan ayaa sidoo kale ku heshiiyay in la kordhiyo xafiisyada ay dowladda fedaraalka ku yeelaneyso maamul goboleedyada sida adeegyada muhimka ah sida Baasaboorada iyo shahaadooyiinka.
Dowladda dhexe iyo maamullada goboleedyada ayaa imika ku heshiiyay In guddiga doorashooyiinka qaranka ay wadatashi loo dhan yahay ku qabtaan muddo 90 maalmood gudahood.
Madaxda dowlada fedaraalka iyo maamul goboleedyada ayaa dhanka bogaadiyay sida habsamida ah ee ay u socoto howsha ololaha doorashada Soomaliland
Dib u eegista Dasrtuurka
Dowlada fedraalka iyo maamullada ayaa imika ku heshiiyay in si wadajir ah looga shaqeeyo talana looga yeesho sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho hal qof iyo cod ah.
Arrintan ayay labada dhinac ka wada hadleen Waxaana lagu heshiiyay in baarlamaanada maamul goboleedyada ay gacan ku yeeshaan dhamaystirka dib u eegista dastuurka ka hor inta aan al horkeenin baarlamaanka.
Arrimaha mashaariicda hormarka
Dowladda dhexe iyo maamul gobleedyada ayaa ku heshiiyay in Mashaariicda Horumarineed, Gargaarka Bani'aadanimo iyo Deeqaha Maaliyadeed loo gaarsiiyo dhamaan dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir si isu miisaaman, loona saaro Guddi Farsamo labada dhinac ah oo ka soo talo bixiya.
Dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa imika ku heshiiyay In la sameeyo Guddi Farsamo iyo Khuburo heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed iyo Gobolka Banaadir oo kala shaqeeya Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka & Dib-u-heshiisiinta, Wasaaradda Dastuurka iyo Hay'adaha kale ee ay arrintani qusayso federaalka.
"In Golaha Baarlamaanka, Aqalka Sare kaalin muhiim ah ku yeesho Hirgelinta Federaalka, Hindise-Sharciyeedyada Cusubi waxay ka bilaaban karaan labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalkaba,ayaa lagu yiri war-murtiyeedka.